WOWOW Chrome: 3 Hole 4 santimetatra Bathro Faucet Chrome miaraka amin'ny Stopper Drain Rod
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana afovoan'ny Centerset / WOWOW 3 Hole 4 inch Centerset Bathro Faucet Chrome miaraka amina Stopper Drain Stopper
Andao hiangona miaraka amin'ny fivondronan-drano, atsangano sy hidina ilay tehina fananganana mba hikirakira ny lakan-drano, izay manome anao traikefa mety sy milamina ary hadio fitondran-tena. 360 ° Fandefasana chrome Premium Swivel Spout Premium chrome farany, ny famaranana dia hanohitra ny harafesina sy ny fandotoana amin'ny fampiasana isan'andro.
FAUCET FANDEFAN-TOROHAN'NY TORA FANORENANA DOUBLE: Fitaovana fandroana 4 mirefy misy famolavolana tahony roa, izay manamora ny fanitsiana ny rano sy ny mari-pana! Ny spout arc lehibe dia manome anao fahazoan-dàlana betsaka eo ambanin'ny spout.
FARANY CHROME VOAFOLY: Faucet zava-poana amin'ny famitana chrome toy ny fitaratra, famolavolana spout avo tsy manam-paharoa amin'ny famoronana doka mbola tsy lany andro. Tsy harafesina, tsy harafesina, anti-rangotra.
EASY INSTALLATION: Ny faucet ao amin'ny efitra fandroana afovoany dia miaraka amina fantsom-pamatarana tehina sy fonon-tànana roa. Ivontoerana 4-inch sy famolavolana mount hole 3 dia mamela fametrahana mora foana.
QUALITY avo lenta amin'ny vidiny: Tongotra varahina miantoka ny faharetana sy ny fiankinan-doha; Vita amin'ny sakafo kilasy BASF, miaro anao sy ny fahasalaman'ny fianakavianao. Ny spout faucet lavatory vita amin'ny aerator ABS dia afaka manampy anao hitahiry rano. (Ity aerator ity dia azo alaina mivantana amin'ny tananao mba hanadio)
SKU: 2321100C Sokajy: Faucets fandroana afovoan'ny Centerset, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana tenifototra: 4 santimetatra
12.2 x 8.66 x 3.11 santimetatra